Jardiinooyinka iyo madadaalada | Ramsey County
Iyada oo ka dhigeyso wax ka badan 7,900 hektar, jardiinooyinka Degmada Ramsey iyo nidaamka madadaalada waxay siisaa fursado madadaalo badan degganayaasha iyo martida si ay u sahmiyaan banaanka oo ay firfircoonaadaan.
92 Maylal oo dhabooyin
9 Jardiinooyinka degmada
6 Jardiinooyinka goboleedka
Xarunta Dabiiciga Tamarack
Kow iyo toban fagaarayaasha barafka
Shaqooyinka biyaha Battle Creek
Waxay ku taalaa White Bear Township, Xarunta Dabiiciga Tamarack waa 320-hektar dhowrsan ee siisaa barnaamijyada waxbarashada sannadka oo dhan dhammaan da’aha. aagga Ciyaarta iyo Beerta Dabiiciga caanka ah ee Discovery Hollow waxay ku bartaan carruurta wax ku saabsan dabiiciga iyaga oo fuulayo fiidaha, dhisayo guryaha geedaha iyo biyo xireenka, u janjeero beerta oo qodoya dhoobada. Joogso dhismaha si aad wax uga baratid xayawaanada oo bandhiga iyo barnaamijyada iyo xeryaha soo socdo.
Jardiinooyinka, dhabooyinka iyo illaha dabiiciga ah
Isticmaalayaasha jardiinada waxay ku raaxeysan karaan dhammaan xiliyada Minnesota iyaga oo dhinaca howlo badan oo kala duwan oo ay ku jiraan falaarta, daawashada shimbiraha, dabaasha iyo gaariga barafka eyga. Shaqaalaha Degmada ayaa maareeyo oo dhowra illaha dabiiciga ah oo ka caawiya hubinta caafimaadka iyo xasiloonida wax ka badan 1,250 noocyo ee laga helo gudaha ama ku dhow Degmada.
Aagaga loogu tallogalay eeyaga aan xireyn waxay u ogolaaneysaa eeyaha iyo milkiilayaashooda inay ku ordaan, sahmiyaan oo dhexgalaan.
Fagaarayaasha iyo hoolalka qafan ee ciyaaraha
Fagaarayaasha Degmada Ramsey waxaa isticmaalo dugsiyada deegaanka iyo ururada tilmaamaha balooniga usha iyo kabaha garaangarta, barnaamijyada iyo tartamaha. Barnaamijyada dadweynaha waxaa ku jiro tartanka kabaha garaangarta, iyo balooniga usha iyo howlaha cowska. Bilaha diiran, fagaarayaasha sidoo kale waxay martigeliyaan dhacdooyinka bulshada iyo dabaaldagyada.
Dabaasha, biyo ku ciyaarida iyo taraaraxa ee kuleelka kuleelaha ee jardiinada biyaha banaanka Degmada Ramsey! Ku yaalo Jardiinada Goboleedka Battle Creek, Shaqooyinka biyaha way u wanaagsantahay qoysaska leh carruurta da’da 10 iyo ka hooseeyo iyo qaababka taraaraxa biyo isku laabida sadexda sheeko, barkada ciyaarta gelitaanka baaxada ebarka iyo aagga ciyaarta ciida.
Dheelayaasha goolofka oo dhammaan heerarka xirfada iyo da’aha waxay heli karaan la ekaanshaha ku haboon oo midka mid ah ciyaaraha Degmada. Ciyaar walba waxay bixisaa kooxyo, barnaamijyada casharka iyo fursadaha tartanka inta lagu jiro xiliga.